Mahita Hatsikana Sy Fihatsarambelatsihy Ao Amin’ny Fandresen’i Donald Trump Ny Afrikana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Novambra 2016 4:59 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, русский, Français, Ελληνικά, Español, English
Voafidy ho filoha faha 45-n'ny Etazonia tamin'ny 8 Novambra i Donald Trump ,kandidà filoham-pirenena Repoblikana, rehefa naharesy ny mpifaninana aminy ao amin'ny Antoko Demaokraty Hillary Clinton. Nahatohina olona maro manerana izao tontolo izao, anisan'izany ny Afrikana ny fandreseny, izay voalaza fa tsy nampoizina indrindra tamin'ny tantaran'i Amerika .
@LindaStruthers3 @bwesigye tokony antsoina hoe mpanao didy jadona tsy mahavita azy sy mpanao kolikoly ary mpampisara-bazana izy.
@bwesigye mangataka ireo tanora Amerikana rehetra mba hampitsahatra ny fanampiana an'i Afrika, hita mazava izao fa mila anareo bebe kokoa i Amerika !
Nanakiana ny tati-baovao mikasika ny fampielezan-kevitra i Nwachukwu Egbunike, mpanoratra ato amin'ny Global Voices avy any Nizeria:
Amin'ny manaraka, tatero ny vaovao. Mampalahelo fa romotra nandritra ny #FifidiananaAmerikana ny fampitam-baovao mahazatra – nahodiny ny vaovao!
#AnkehitrinyEfaFilohaTrump Hanararaotra hihinana popcorn aho, satria ho roahina hiverina any an-tananakely nihaviany ny vadiko taloha .
#AnkehitrinyEfaFilohaTrump Ao amin'ny seranam-piaramanidina ho aty Afrika ny dadatoako pic.twitter.com/oIXpUiO1N9 .
#AnkehitrinyEfaFilohaTrump Any Afrika aho no hivelona sy ho faty 😂😂
#AnkehitrinyEfaFilohaTrump Efa fantatro ny lesona hoe tsy manome antoka ny asa ny traikefa. Mandehana mitady io asa izay mitaky traikefa 10 taona io .
#AnkehitrinyEfaFilohaTrump Tsy tokony hanoro hevitra anay izay ho fidianay amin'ny 2017 ny Amerikana.
Nanao izao fandinihana manaraka izao i Ifeatu Nnaobi, Nizeriana mpanoratra:
Nanamarika izy fa:
Na izany aza niaiky izy fa tsy ny rehetra akory no very :